Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jude Bellingham Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Jude Bellingham na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, Net Worth, Web, and Personal Life
Na nkenke, anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ zuru oke nke akụkọ bọọlụ ndị bekee, site na mbido ya, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ na-agụ gị, lee nchịkọta nke Jude Bellingham's Bio na foto. Ọ na-akọ akụkọ ọfụma?…
Obi abụọ adịghị ya, ụzọ Dortmund jikọtara ndị na-eto eto bụ ihe na-enweghị atụ.
Ọzọkwa, mụ na gị maara na Jud bụ nwatakịrị ahụ si England nke gbasoro nzọụkwụ Jadon Sancho - imere onwe ya aha na Germany.
N'agbanyeghị nkwado ahụ, anyị ghọtara na ọ bụghị ọtụtụ gụchara akụkọ ndụ ya zuru ezu. Ihe jupụtara na akụkọ ifo ndị na-atọ ụtọ ma na-emetụ n’obi. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido n'akụkọ banyere oge nwata.
Jude Bellingham Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka Biography Starters, ọ na-aza aha 'Jude Bọọlụ'. A mụrụ Jude Victor William Bellingham na 29th nke June 2003 na nne ya, Denise Bellingham na nna, Mark Bellingham (onye uwe ojii) n'obodo ahịa nke Stourbridge, England.
Nwa amaala West Midlands bụ ọkpara nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti ndị mụrụ ya.
Na foto dị n'okpuru, echere m na ị ga-ahụ ihu na ihu anụ ahụ nke nne Jude Bellingham nọ n'ime ya. Enweghị ajụjụ, Denise nwere usoro ọmụmụ kachasị mkpa n'ezinụlọ.
Zute nne na nna Jude Bellingham - nna ya, Mark Bellingham na nne yiri anya (Denise).
Jude Bellingham Na-etolite Afọ:
Onye ọkpụkpọ bekee nọrọ oge ọ bụ nwata na etiti England n'akụkụ nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ bụ Jobe Bellingham.
N'oge ahụ, ọtụtụ ndị hụrụ Jud dị ka nwatakịrị na-ekwe nkwa - nwatakịrị na-erube isi nke (mmalite) mara ihe ọ chọrọ na ndụ.
Mgbe ọ bụ nwata, Mark kwuru na nna ya kọọrọ ya akụkọ banyere ụbọchị ya dị ka onye na-egwu egwuregwu bọọlụ na-abụghị otu ebe o meriri ihe karịrị 700. Ọzọkwa, otu o si ghara ime ya na nnukwu egwuregwu.
N'ịchọ ịgbazi nke ikpeazụ, obere Jude kwere nkwa itinye ndụ ya niile na football. Nke a hụrụ mmalite nke ntọala ntọala ya nke anyị ga-akọwa na njedebe nke Bio ya.
Jude Bellingham Ezinụlọ:
Dika anyi nwere ike igwa, o sitere n’ezinulo nwere ego ya. Nna Jude Bellingham (Mark) - onye na-arụ ọrụ dị ka onye uwe ojii na West Midlands- na-enweta okpukpu abụọ ka nke onye ọrụ Bekee oge niile.
Jude Bellingham's mum (Denise), n'aka nke ọzọ, bụkwa nwa amaala na-arụ ọrụ na England.
N'ihi ya, o doro anya na o tolitere n'ezigbo ezinụlọ, nke na-enweghị nchegbu ego.
Na-ekpe ikpe site na ebe a mụrụ ya, onye na-eto eto na-eto eto si n'ebe ọdịda anyanwụ nke England - dị nso na Wales. Ozo, aghaghi ihu na… ile anya n'ile ya anya na-eme ka ị chee na mgbọrọgwụ nne ya gafere ókèala Europe.
Eziokwu bụ, ezinụlọ Jud Bellingham sitere na Bekee na mgbọrọgwụ Africa. Nnyocha na-egosi na nwatakịrị ahụ ji agbụrụ Africa ya site na nna nna ya.
Jude Bellingham Eziokwu Akụkọ Akụkọ:
Akụkọ akụkọ football nke Jud malitere mgbe ọ dị afọ isii. Nke a bụ oge ọ malitere ịkwado Bad - aha otutu maka Birmingham City FC. N'oge ahụ, Bellingham nwere mmasị na klọb nke yiri aha ya. O nwere olile anya di elu nke ibanye na ulo akwukwo nke ulo oru a n'ihi obi uto ya na aha ibi ndu nke ezinulo ya.
Mmụta na agụmakwụkwọ:
Dị ka iwu, ndị mụrụ ya hụrụ na ọ gara ụlọ akwụkwọ. Mgbe ọ na-agụ akwụkwọ na Priory School na Edgbaston, nna Bellingham mere ka ọ sonyere ndị otu nọ n'okpuru 8 Birmingham City. Site na ọdịdị ihu ya, ị nwere ike ịmata mmetụta ya. Nke a bụ mmetụta nke ịgabiga ule agụmakwụkwọ - otu n'ime oge nwata ya kachasị mma.
Dika onye ozo amuru na West Midlands - Daniel Sturridge - Bellingham natara ọtụtụ nkuzi nkuzi n'aka nna ya.
Ndụ mbido nke Jud Bellingham na Birmingham City:
Na Bad, o gosipụtara ọfụma football karịa ndị ọgbọ ya. Site na mmụba nke ihu igwe, ihe Jud na-enweghị ike ịkwụsị.
Ikike ya mere ka onye nkụzi ya tụkwasị obi wee mee ka ọ nwee ihe ùgwù nke ịkwalite ngwa ngwa na otu U-18 na U-23 nke Birmingham n'oge 14 na 15, n'otu n'otu.
N'oge na-adịghị anya, nwa okorobịa bekee na-eto eto ghọrọ onye nwere ihu ọma dịka Demarai Gray ma were were agụmakwụkwọ afọ abụọ na Birmingham City na Julaị 2019.
Oge nwa ọ bụla na-eto eto rọrọ nrọ mechara bịa. Ndị nne na nna Jude Bellingham na ndị ezinụlọ ha nwere obi ụtọ ịnwe aka ha binyere aka na nkwekọrịta afọ 16 na ụbọchị 38.
Jude Bellingham's Biography- tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ịga n'ihu na ndụ ọhụrụ, nwata ahụ malitere imebi ihe ndekọ. Nke mbu, Jud ghọrọ onye kacha nta nke Birmingham mgbe ọ gbara afọ iri na isii na ụbọchị iri isii na atọ.
N'oge a na ndụ ya, ọtụtụ ndị ama ama - ọkachasị Man United - bịara rịọ maka mbinye aka ya.
Iji mee ka ihe dị mma, nne na nna Jude Bellingham kparịta ụka nke ukwuu - ma ọ bụrụ na United ziri ezi maka nwa ha nwoke.
Mgbe ha nyochachara ọtụtụ, ha jụrụ azụmahịa nnyefe nke Red Devil nke million 20 nde. Maka ihe doro anya, Bellingham mechara kpughee ihe mere o ji sụọ Manchester United.
Jude Bellingham Storyga nke Ọma Akụkọ nke:
Na-eso nzọụkwụ ụfọdụ Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee ndị mere ya na mba ofesi, ọ malitere ịsọpụrụ onyinye nkwekọrịta na-abụghị England.
N'etiti klọb niile, Dortmund gbagoro na ịbanye High Teated English Teen.
Na-aza oku nke akara aka, Bellingham sonyeere Erling Haaland na Dortmund maka ego a kọrọ banyere £ 25 nde.
Site na nnyefe a, ọ ghọrọ nwa 17 dị oke ọnụ na akụkọ ihe mere eme nke Football.
N'ụzọ na-akpali mmasị na Dortmund, o gosipụtaraghị ihe ịrịba ama nke ịla azụ ma na-ebili ma na-ebili.
Ị maara?… Jude Bellingham ghọrọ onye ntà nwata nke Borussia Dortmund nwere ebumnuche izizi. Ihe omume a hụrụ ya ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ntorobịa kachasị mma na Europe.
Echefula, ọ mebiri ndekọ nke ejiri Phil Foden dị ka onye ọkpụkpọ Bekee nke ọdụdụ ịmalite egwuregwu Njikọ.
Hụla ihe ndị ọ rụzuru n'oge ọ dị obere, Gareth Southgate egbughị oge n'ịkpọọ nwatakịrị ahụ ka ọ bụrụ okenye mbụ ya na England.
Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu maka Video Highlight, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Jude Bellingham Girlfriend / Wife to be?
N'ịbụ onye na-eto eto ma lekwasị anya n'ihe ịga nke ọma n'ịrụ ọrụ ya na-akọwa ihe kpatara na ọ naghị elebara ndụ ịhụnanya ya anya.
Obi abụọ adịghị ya, enwere ndị enyi nwanyị na nwunye nwere mmasị na ihu ya mara mma.
Mgbe anyị nyochachara ọtụtụ ihe, anyị erutela na nne na nna Jude Bellingham (n'oge a na-ede akwụkwọ) ekweghị ka ọ nwee enyi nwanyị. More nke a na ngalaba ezinụlọ ya.
Jude Bellingham Ndụ Nke Onwe:
Ewezuga ọrụ ya dị ka ndị ịgba egwu bọọlụ, ịghọta ụdị onye ọ bụ ga-enyere gị aka ịmatakwu ya.
Mbụ ndu Júda l'ẹphe ha, bụ ndu ,zurẹlu; Nke abuo, o siri ike iri nri ma choro isi nri. Jude dabere na nne ya maka ọrụ niile nke kichin.
Me omume dị ka okwute anaghị egbochi ya igosipụta ụdị ịkpa ọchị ọkachasị n'ebe ndị enyi na ndị ezinụlọ nọ.
N'ezie, Bellingham na-eme mgbe ụfọdụ ka ndị otu egwuregwu chịa ọchị n'agbanyeghị na ọchị abụghị ọrụ ya. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ọ bụ onye ọbụ abụ na-atọ ọchị, dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo dị n'okpuru.
Si ebi ndụ na Net bara uru:
Ruo mgbe ọ kwagara Dortmund, nne na nna Jude Bellingham mere ka nwa ha nwoke biri n'ụlọ ya na ezinụlọ ya. Agbanyeghị, mgbe ọ sonyechara n'akụkụ German, ọ nwetara ụlọ nke ya na ụgbọ ala mara mma.
Mgbe anyị na-enyocha ego ọ na-enweta, anyị chọpụtara na Bellingham na-akwụ ụgwọ ọnwa kwa izu nke ihe dị ka € 57,000 na Dortmund.
You maara?… Ego ọ na-enweta na Birmingham City bụ ahụekere - naanị £ 145.
Obi dị m ụtọ na nkwekọrịta BVB emetụtawo ụgwọ ọrụ ya nke ọma wee mee ka ọnụ ahịa ọnụọgụ ya bara ụba nke dị ugbu a n'etiti 2 ruo 3 nde pound (2020 stats).
Jude Bellingham Ezigbo Ndụ Ezinụlọ:
Maka onye na-eto eto, ụzọ stardard agaghị adị larịị na-enweghị enyemaka nke ndị ezinụlọ ya. N'akụkụ a, anyị na-ewetara gị eziokwu karịa banyere ezinụlọ Jude Bellingham na-amalite site na papa ya.
Eziokwu banyere Nna Jude Bellingham:
You nwetụla mgbe ị na-eche ebe ọ na-emetụ football? Ọfọn, ebe a bụ eziokwu; O doro anya na talent Bellingham sitere n'aka nna ya, Mark Bellingham.
Tupu ọ banye na ndị uwe ojii na ọbụlagodi mgbe ọ banyere ọrụ ahụ, Mark gbara bọọlụ iji mee ka ezinụlọ ya mee ihe ruru afọ iri anọ.
N'oge ahụ, ikike pụrụ iche Mak nwere na-emetụ ọtụtụ ndị na-abụghị ndị otu egwu na-ama jijiji mgbe ha hụrụ ọnụnọ ya.
N'ime ọrụ ya na-abụghị njikọ, nna Bellingham meriri ihe mgbaru ọsọ 700. N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị ya na ndị na-abụghị Njikọ dịka Jamie Vardy mere.
Eziokwu gbasara nne Jud Bellingham:
Ebe ọ bụ na Jud ka bụ onye isi na kichin, Denice mama ya kwetara ịhapụ England iji soro nwa ya nwoke biri na Dortmund.
Mgbe Mark na-eme ka nwa ya nwoke nweta ezigbo ọrụ, ọ na-elekọta ụlọ site n'ịhụ na Jud enweghị ihe ọ bụla n'ụlọ.
N'ụbọchị ndị ahụ, Denice lekọtara Jude na Jobe anya nke ọma mgbe di ya na-arụsi ọrụ ike na ndị mmanye iwu na Midlands. Lee nne na otu nwa nwoke anya.
Eziokwu banyere nwanne nwanne Jude Bellingham:
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ England nwere ezigbo mmekọrịta nke nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ, Jobe nwere. Siblingsmụnne abụọ ahụ tolitere n'okpuru onye nlekọta nke ndị mụrụ ha ma ha abụọ sonyere na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Birmingham City FC.
Nwanne Bellingham ka na-egwu bọl ma na-ele anya nnukwu bro ya dị ka ihe nlereanya.
Ikekwe, ọ bụrụ na nwa agbọghọ ahụ nwere nwanne nwanyị, ya onwe ya kwa nwere ike isonyere ụmụnne ya na njem ha. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere olileanya na ọrụ Jobe na-eto eto karịrị nke papa ya (Mark).
Banyere ndị ikwu Jude Bellingham:
Ikwu okwu banyere agbụrụ Britain-Black ya na nne na nna ya ochie bụ maka ịkwọ ụgbọ mmiri na-enweghị atụ. N'oge a, enweghị ozi gbasara nwanne nna ya, nwanne nne ya, nne nna ya wdg.
Jude Bellingham Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Akụkọ Ndụ anyị na onye Bekee, lee ụfọdụ ihe ga - enyere gị aka ịghọta nke ọma banyere Biography.
Eziokwu nke 1: Nọmba Jersey lara ezumike nká:
Mgbe ọ sonyere Birmingham City maka ọrụ agadi ya, e nyere Jude akara ndị uwe ojii 22. N'ihi na ọ dị mma, ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịla ezumike nká nọmba ya n'aha ịsọpụrụ ya.
Nke ahụ agbaghị nke ọma na ndị agbụrụ ndị nwetara Birmingham FC asara n'ọkụ maka ịla ezumike nka hamba 22 maka nwa nwoke ka na-egwu egwuregwu 44.
Ọ bụ ihe a na-apụghị ikweta ekwenye na ụgwọ ọrụ ya si na narị pound ole na ole ruo ihe dị ka € 58,000 kwa izu.
Nnyocha na-egosi na onye Bekee ga-arụ ọrụ otu afọ na ọkara iji mee ihe Bellingham na-enweta n'ime otu izu.
Gwọ na Euro (€)
Kwa Afọ € 3,000,000
kwa ọnwa € 250,000
Kwa Izu € 57,604
Kwa .bọchị € 8,229
Kwa elekere € 343
Kwa Nkeji € 5.7
Kwa nke abụọ € 0.09
Anyị ejirila nlezianya tụlee nyocha nke ego Bellingham dị ka elekere na-akụ. Lee n’onwe gị ego ole o megoro kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Jude Bellingham's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 3: Ogbe ohere:
You maara? Club ụlọ ugwu dị na London bụ ụlọ ọgbakọ mbụ na-agụ akwụkwọ maka afọ iri na ụma. Arsenal bịara nso nke ịbanye na Jude Bellingham mana agbaghara n'ihi mgbanwe na njikwa ha.
Eziokwu nke 4: Ezigbo ikike FIFA, ọkwa dị ugbu a adịghị mma:
N'agbanyeghị na ọ dị obere, Bellingham gosipụtara àgwà ndị mere ka ọ dị elu n'etiti ndị ọgbọ ya.
Site na profaịlụ ya, anyị hụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ nwere nkwa nwere ikike dị ukwuu karịa uwe aka ya. N'ụzọ dị mwute, ọkwa ya ugbu a na-ata ahụhụ - naanị 4 isi n'okpuru Sean Longstaff.
Na mmechi, anyị enweghị ike ịgọnahụ eziokwu ahụ bụ na Jude Bellingham maara ihe ọ chọrọ kemgbe ọ bụ nwata. Dị ka Nick Pope, ọ kwụọla ụgwọ ọrụ ya site na egwuregwu ndị dị ala wee ruo n'ogo.
Ọzọkwa, ịmara nke ahụ Borussia Dortmund bụ ebe kachasị mma maka ya agaraghị enwe ike ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ụkpụrụ ezinụlọ.
Ndị nne na nna Jude Bellingham (Mark na Denice) nọ ebe ahụ n'oge ọ bụla dị mkpa nke ndụ ya. N'ihi ha, o mere mkpebi bara uru nke gbanwere ndụ ya.
Daalụ maka ịgụ Biography nke Jude Bellingham. Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla na-adịghị mma na edemede a.
Ma ọ bụghị ya, gwa anyị echiche gị banyere akụkọ midfielder na ngalaba nkọwa. Ugbu a iji nweta nghọta zuru oke nke Jude Bellingham's Bio, jiri tebụl Wiki anyị.
Aha n'uju: Jude Victor William Bellingham
Aha Nick: Jud Bellingham
Ụbọchị ọmụmụ: 29th June 2003
Age: Afọ 17 na ọnwa 11
Ebe amụrụ onye: Stourbridge, West Midlands, England
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Mark Bellingham
Ụmụnne: Jobe Bellingham (Nwanna nwoke)
Ezigbo Net: 2 ka million 3 (2020 stats)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: € 3 nde.
Magburu onwe… .. Worth ọgụgụ
Olileanya na ị ga-egwu nke ọma na echi Jude na Obi ụtọ na 18 ụbọchị ọmụmụ nchekwube na m bụ onye na-achọ gị mbụ site na nke a .. nke a bụ ihe niile m nwere ike ime si Mizoram India
Last edited 1 month ago by Dinsangi